राष्ट्रिय धुन बजिरहदा रोकिएन शहिद परिवारका आँशु !, प्रहरी परिसरमै डाको छाडेर रुन थालेपछि… (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
राष्ट्रिय धुन बजिरहदा रोकिएन शहिद परिवारका आँशु !, प्रहरी परिसरमै डाको छाडेर रुन थालेपछि… (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । एकातिर राष्ट्र सेवा अर्कातिर परिवार। नेपाली आमा र नेपाली माटोको कसम खाएर राष्ट्रको सेवा गर्न खटिएका नेपाल प्रहरीप्रति हामी शिर ठाडो पारेर गर्व गर्न सक्छौँ। आम जनता र सिंगो राष्ट्रकै खातिर जीवन बलिदान दिन हरदम तत्पर वीर प्रहरीप्रति जो कोही पनि ऋणी हुन्छन्।
बिहीबार प्रहरी प्रधान परिसर नक्सालमा एकातिर अमर वीर सहिद परिवारकालाई सान्त्वना दिने खालको राष्ट्रिय धुन बजिरहेको थियो भने अर्को तिर अश्रुधार बहिरहेको थियो आफन्तको। तिनै वीर सहिदहरुको सम्झनामा। विछोडको बेदनाले अमर वीर सहिदका परिवारका आमाबुबा, श्रीमति छोराछोरी उस्तै भावविभोर भएका थिए। कोही भन्दै थिए–रुँदिन भन्दा पनि रोइन्छ।’
यसैवर्ष वीरगति प्राप्त गरेका वीर प्रहरी कार्यलय सहायक हरिबहादुर गुरुङकी पत्नी रिता गुरुङका आँशु थामिएनन्। उनी प्रहरी परिसरमै डाको छाडेर रुन थालिन्। रिता आफूमात्र रोइनन् उनलाई देख्ने हरकोहीका आँखा उस्तै रसाएका थिए। रिताले भनिन्–उहाँलाई सम्झिएर आफूलाई सम्हाल्नै सकिन।’ उनले रुँदै भनिन्–‘अफिस् जानु भएको थियो। घर आउनु हुन्छ भन्दै आशाले कुरेर बसेकी थिए। मृत्युको खबरले असह्य भयो सबै घटना सपना जस्तै भयो।’
बिहीबार प्रहरी स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नेक्रममा रिता निकै भावविभोर भएर आफूलाई सम्हाल्नै सकिनन्। महिला प्रहरीहरुले उनलाई केही छिन् सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। जति पटक पुछेपनि अश्रुधार बगिरहेको थियो। ‘श्रीमान् बितेपछि समय पनि लामो जस्तो लाग्न थाल्यो,’ उनले भनिन्। रिताका साथैमा छोरी पनि थिइन्। आमाको अबस्थाले छोरीका आँखा पनि सँगसँगै रसाएका थिए।
रिताले आँशु पुछ्दै भनिन्–छोरीले बाबा खोइ भन्छे जवाफ दिनै सक्दिन।’ रिताका अनुसार हरिबहादुर गुरुङ १३ वर्षदेखि प्रहरीमा कार्यरत थिए। उनले सम्झिँदै भनिन् अब ७ वर्ष काम गर्दा उहाँको पेन्सन पाक्थ्यो । तर नसोचेको घटना भयो। बिवाह गरेको ९ वर्ष भयो। रिता ३० वर्षकी भइन उनकी ८ वर्षकी छोरी छिन् । धादिङ घर भइ काठमाण्डौ क्षेत्रपाटी बस्दै आएकी रिता श्रीमान सँग बस्ने सपना अधुरै रह्यो। उनी भन्छिन, ‘कार्यरत हुँदा सँगै घुम्नेडुल्ने रमाइलो गर्ने समय नै भएन । अब कुन जुनीमा भेट होला ?’
निष्ठावान,कर्मठ जनताको सेवक पति हरिबहादुर गुरुङको निधनले रिता मात्र होइन सिंगो राष्ट्रलाई नै क्षति पुगेको छ । रिता र रिता जस्ता थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरु छन् सिँउदो पुछिएका, थुप्रै आमाबुबाहरु छन् बुढेस्कालमा छोराको सहाराको आशा निभाएका, थुप्रै छोराछोरीहरु छन् टुहुरा भएका र थुप्रै आफन्तहरु छन् दुखि भएका। तर पनि राष्ट्र र जनताका लागि समर्पित वीर नेपाली आमाका सुपुत्रहरुको बलिदानको लागि आशू भन्दा दृढ साहस र निष्ठावान कर्तव्यको आबश्यकता महशुुस गरि अघि बढ्नुपर्ने हो की ?
Prevछक्का पञ्जा ३ हेर्न पुगेका दर्शकले टिकटको पैसा फिर्ता मागे ! अकस्मात के भयो यस्तो ? हेर्नुहोस यस्तो रहेछ रहस्य (भिडियो सहित)
Nextआफु सुत्ने कोठामा यी ६ कुराहरु भुलेर पनि नराख्नुस्, जसले दाम्पत्य जिवनमा यस्तो हानि पुर्याउँछ ! बिबरण सहित हेर्नूहोस
दुई नेपाली इञ्जिनियरको सहयोगमा वैशाखमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण हुँदै (बिबरण सहितहेरी शेयर गरौ)